Apple waxaa laga yaabaa inay hakisay wadahadaladii ay kula jirtay matoorrada Kia | Waxaan ka socdaa mac
Hal xan oo kale oo ku saabsan filimkan "Apple" ah oo ku saabsan Apple Car. Maalmo ka hor waxaan helnay hubaal inuu noqon doono Kia matoorro, hoosaad ka tirsan Hyundai oo mas'uul ka noqon doonta soo saarista Apple Car cusub. xarumaha shirkadda ee Mareykanka. Waxa kale oo ay u muuqataa in Apple ay kari karto maal gashan 3.600 milyan soo saarista gaariga. Dhammaan waxyaalahan daadinta ah sifiican ugama fadhiyin waxayna umuuqataa in shirkada Maraykanka ayaa hakisay wadaxaajoodka wata mootooyinka Kia.
Dhamaan wararka xanta ah ee maalmahan soo ifbaxayay ee ku saabsan xiriirka ka dhexeeya Hyundai iyo Apple ee soo saarista Apple Car, run noqon kara. Sababtoo ah hadda shirkadda Tim Cook waxay go'aansatay (sida ay sheegeyso xanta cusub) inay joojiso wadahadalka Hyundai (runtiina Kia, oo mas'uul ka noqon doonta soo saarista gaariga oo ah shirkad hoosaad tii hore).
Haddii wada hadalada horey u jireen iyo wararka la xiriira ay run yihiin, Apple sifiican ugama fariisanin xogaha iyagoo tixgelinaya inay had iyo jeer fuliso dhamaan ficiladeeda sida qarsoodiga badan iyo masayrka qarsoodigiisa. Wax aad ka dalbato shaqaalahaaga iyo qalabkooda. Waa inay run ahaadaan maxaa yeelay Hyundai ayaa xaqiijisay wadahadalo ay la gashay shirkadda Apple tanina waxba kama ay jeclayn haba yaraatee. Shirkadda Kuuriya ayaa bilawday isla markiiba bayaan sixitaan ah bilowga wadahadallada lagu ansaxiyay.
Bloomberg ayaa soo warisay in ku dhawaaqista Hyundai iyo warar kale oo faahfaahsan oo ku saabsan wadaxaajoodyada Apple ay la gashay shirkadda baabuurta sameeysay ayaa ka careysiisay Apple. Qoraalka ayaa sheegaya in ma cada goorta dib loo bilaabi karo wada hadalada inta udhaxeysa Apple iyo Hyundai. Markaa hadda ma cadda in ay Kia noqon doonto oo ugu dambayntii la wareegi doonta soo saarista gaariga Apple. In kasta oo aysan jirin shirkado aad u tiro badan oo taageeri kara mashruucan.
Waa inaan samirnaa oo sug inaad aragto waxa ka soo baxa waxaas oo dhan. Hubso Apple aad uma walwalayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxaa laga yaabaa inay hakisay wadahadaladii ay kula jirtay matoorrada Kia